Umlingo wokugquma umvambo | Ukuzoba
Umlingo wokugquma umvambo
UAlberto Perez | | Body Art, Iitatoo, Iitattoos zivuliwe, IiTattoos engalweni, Iitattoo zeqatha, Iitattoos ngasemva, Iitatto emlenzeni
Okukhulu le tattoo kufuneka igqunywe, kokukhona kuya kufuneka ikhava ingaphezulu
Masicinge ngemeko: ngobunye ubusuku ubunxila uthathe isigqibo Zenzele umvambo onamanyala kwisifundo esosulelekileyo; uthando lobomi bakho ngoku lolomnye umntu; Elo binzana likhethekileyo ayinguye uEinstein ... nokuba umzobi we tattoo yayiyingubo, okanye ukuhamba kweminyaka kuyonakalisile i-inki, okanye i-tattoo iphelelwe lixesha kune-orenji.
Nokuba yeyiphi indlela, uthathe isigqibo uyayithiya itattoo yakho kwaye awufuni kuyisusa nge-laser. Enye indlela kukuyigubungela nge Gquma. Kuya kufuneka ugcine izinto ezimbalwa engqondweni ngaphambi kokwenza esi sigqibo, njengoko ukwenza umvambo kunyamalale akukhawulezi okanye kube lula njengeqhinga lomlingo.
Abanye bafihla ngokulula kukujonga kunye nokwandisa itattoo yangaphambili
Ukugquma umvambo kubonisa iingxaki ezininzi. Eyokuqala ngu ubungakanani. Isigqubuthelo kufuneka sikhulu kune tattoo ekufuneka sigqunyiwe, ke ngoko inkulu le inkulu, enye iya kuba nkulu. Oko kuyakuquka umsebenzi omninzi, inki engakumbi, kunye nentlungu engakumbi njengoko indawo echaphazelekayo inyuka.
Okwesibini ngu i-inki eyayisetyenziswa neyokuqala. Eminye imibala kunzima ukuyigquma eminye; Kule nto kongezwa ukuba ii-inki zangoku ziyamelana nokugqunywa kunaleyo indala okanye yehle. Owesithathu ngu ubuchule bomzobi wokuqala we tattoo: Ukuba ikushiye neziva ezininzi, kuya kuba nzima ngakumbi ukuyilungisa.
Okunye ukugubungela iimaski umvambo wangaphambili kwaye kuyenze inyamalale
Inkqubo esetyenzisiweyo ayisiyokuwugubungela nje ngomzobo omtsha kunye nemibala eyomeleleyo, kodwa kukwenzela ngeso lengqondo ukusebenzisa iifom zakudala kwaye uzidibanise nezintsha ukuze iliso ligxile kumanqaku athile etattoo entsha kwaye lingaboni eyangaphambili.
Kuyimfuneko ukuba ukhethe umntu olungileyo, asidinwa ukukuxelela, kodwa kule meko kubaluleke ngakumbi kunakwamanye amaxesha, kuba ukuba umvambo omtsha ayigqunywa kakuhle, Uya kuba neeTattoo ezimbini ezibonakalayo kwaye ukugquma kamva kuya kuba nzima ngakumbi njengoko iingxaki ziphindaphindeka.
Imigca-Amaphupha amabi kwi-Ink yakho
Iifoto -I-2Face Tattoo kwi-devianART, i-2Face Tattoo kwi-devianART, iFlickr
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Body Art » Umlingo wokugquma umvambo
Intsingiselo yokwenza umvambo kwintyatyambo ye-lotus
Ukungavumi kweTattoo: inyani engathandekiyo